အဲ့ ဒီနေ့ က ကျောင်းမ သွားဖြစ် ခဲ့ ပါ – Hlataw Entertainment
အဲ့ ဒီနေ့ က ကျောင်းမ သွားဖြစ် ခဲ့ ပါ
ကျောင်းသွားခါနီး ကျောင်းဝတ်စုံလေးဝတ်ပီး မှန်တင်ခုံရှေ့ မှာ ကိုယ်ကို တပတ်လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ အိမ်ထောက်ကျခဲ့ပီးသား ဆိုပေမယ့် လှဆဲပဆဲ ယု ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်ပီး ကျေနပ်မိတယ်။ ဒီနေ့ မေမေ က အစောကြီးကတည်းက ဘုန်းကြီးကျောင်းကို ထွက်သွားသည်မို့ အိမ်မှာ တိတ်ဆိတ်နေတယ်။ အိမ်ထောင်ကွဲပီးကတည်းက မေမေရယ် ယုရယ် နှစ်ယောက်သား အတူတူနေတဲ့အိမ်လေးပေါ့။ ရူးရူးမိုက်မိုက်နဲ့ အိမ်ထောင်ပြုခဲ့ပေမယ့် သဘောထားခြင်း ဆီနဲ့ရေလို ကွာခြားမှုကြောင့် အိမ်ထောင်သက်တမ်း ကြာကြာမခံခဲ့။ အတိတ်ကိုပြန်မတွေးချင်တော့သည်မို့ သက်ပြင်တစ်ချက်ချလိုက်ရင်း ဆံထုံးလေးကို သေချာပြင်ဆင်လိုက်သည်။
ကြိမ်ဆွဲခြင်းတောင်းလေးထဲ လိုအပ်တာတွေ ဖြည့်ပီး စောနေသေးသည်မို့ အခန်းထဲ အဝတ်တွေ ခန သိမ်းလိုက်နေလိုက်တုန်း အိမ်ရှေ့တံခါးခေါက်သံကြားသည်မို့ သွားဖွင့်လိုက်မိတယ်။ ( အော်… ကိုကြီး တစ်ယောက်ထဲလား မမ မပါဘူးလား ) ယုအမရဲ့ ယောင်္ကျား ကိုစိုး ပေါ့။ ( မပါဘူး ညီမလေး အမေ့အတွက် အားဆေးတွေလာပို့တာ ယုကျောင်းသွားတော့မလို့လား အမေတို့ရော) ( ဟုတ်… စောသေးလို့ အိမ်သန့်ရှင်းရေးလုပ်နေတာ ထိုင်ဦးလေ ကိုကြီး အမေတို့ အစောကြီးကတည်းက ဘုန်းကြီးကျောင်းထွက်သွားကြတယ် ) ကိုစိုးက အိမ်ထဲ ၀င်လိုက်ပီး မျက်လုံးတွေက ယုတစ်ကိုယ်လုံးကို သိမ်းကျုံးကြည့်ရင်း ( ယုက အရင်ထက်တောင် ပိုပိုလှလာတယ်နော် ကျောင်းဆရာမဝတ်စုံလေးနဲ့ အရမ်းလိုက်တယ် ချစ်ဘို့ကောင်းတယ် ) ကိုစိုးက ဆေးထုပ်တွေပေးရင်းပြောသည်။
လည်ကတုံးရှပ်အကျီလက်ရှည်နဲ့ ပုဆိုးကိုသပ်သပ်ရပ်ရပ်ဝတ်ထား တဲ့ကိုစိုးကလဲ တကယ်ကို ခန့်ပါတယ်။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် ယု အိမ်ထောင်မကျခင် မမ နဲ့ ကိုစိုးအိမ်ထောင်မပြုခင်က ကိုစိုးကို ကြိတ်ကြွေခဲ့ဖူးတာ။ မမနဲ့ ကိုစိုးယူတော့ ယု စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရသေးသည်။ ယု အိမ်ထောင်ကျပီး အဆင်မပြေတော့လဲ ကိုစိုးက ကူညီခဲ့သည်။ အိမ်ထောင်ကွဲတော့လဲ ကိုစိုးက နှစ်သိမ့်ပေးခဲ့လို့ ကျေနပ်မိခဲ့သည်။ ( မမ က ပိုချစ်စရာကောင်းတာ မဟုတ်ဘူးလား ) ( ယုက ပိုလှတာပေါ့ သူ့ကိုသွားမပြောနဲ့နော် ) ( ဟွန်းးး နော် ) ယုက နှာခေါင်းလေးတွန့် နုတ်ခမ်းလေးတွန့်ကာ မျက်စောင်းလေးထိုးပြလိုက်သည်။ ( ထိုင်ဦးလေ ကိုကြီး ယု ကော်ဖီဖျော်လိုက်မယ်လေ ဘာစားပီးလဲ ) ( ယု ကျောင်းနောက်ကျနေပါ့မယ်နော် ) ( ရတယ်ကိုကြီး ဒီမနက်ပိုင်း ယုအတန်းချိန်လဲ မပါဘူး စောလဲစောသေးလို့ သန့်ရှင်းရေးလုပ်နေတာ ) ယုလဲ ကော်ဖီဖျော်ဘို့ မီးဖိုခန်းဆီသွားလိုက်တယ်။
ယုနောက်ကို ကိုစိုးလိုက်လာပီး ကော်ဖီဖျော်နေတာကို မီးဖိုအခန်းဝကနေ ကိုစိုးကကြည့်နေခဲ့တယ်။ အဖြူရောင်ခါးတို ရင်ဖုံးလေးနဲ့ တင်းကြပ်နေအောင်စည်းထားတဲ့ ကျောင်းစိမ်းထမိန်အောက်က တင်းကားထွက်နေတဲ့ ယုရဲ့တင်ပါးတွေကို ကြည့်နေခဲ့တယ်။ ခယ်မ မို့စည်းစောင့်နေခဲ့ပေမယ့် ယုရဲ့ အလှတွေက ကိုစိုးကို ဖမ်းစားနေတယ်။ အိမ်ထောင်သက်ခနလေးနဲ့ ကွဲကွာခဲ့တာမို့ တင်ပါးတွေက တင်းတင်းရင်းရင်းရှိနေဆဲ။ ကျောင်စိမ်းထမိန်ကို တင်းကြပ်နေအောင် စည်းနှောင်ထားသည်မို့ အောက်ခံဘောင်းဘီမျှောကြိုးရာလေးက တင်ပါးမှာ အထင်သားပေါ်နေတယ်။ ကိုယ်ခန္ဓာလှုပ်ရှားလိုက်တိုင်း ခါးတိုအကျီနဲ့ထမိန်ကြားက ဖြူဝင်းဝင်း ခါးသားလေးတွေပေါ်ပေါ်လာတာက ချစ်စရာကောင်းနေသည်။
ယုရဲ့ နောက်ပိုင်းကို ကိုစိုးကြည့်နေမှန်း ယု ရိပ်မိသည်မို့ ကော်ဖီဖျော်တာကို အချိန်ဆွဲပီး ဖျော်နေမိသည်။ ကော်ဖီဖျော်ပီး လှည့်ထွက်လာတော့ ကိုစိုးက ယုကိုစူးစိုက်ပီးကြည့်နေသည်မို့ အကြည့်ချင်းဆုံမိသည်။ တော်တော်ကြာအောင် အကြည့်စုံနေမိပီး ယုက ပြုံးပြလိုက်ကာ ( ရော့ကိုစိုး ကော်ဖီသောက်ဦး ) ကော်ဖီခွက်ကိုလှမ်းယူရင်း ယုလက်ကိုပါ ကိုင်လိုက်သေးသည်။ တစ်အိမ်ထဲမှာ နှစ်ယောက်ထဲ ဆိုတဲ့အသိရယ် ယောင်္ကျားနဲ့မိန်းမ လက်ချင်းတို့ထိမိလိုက်သည်က ယုအတွက် ဓါတ်လိုက်သလို တုန်ရင်နေမိတယ်။ ( ယု … ) ( ရှင်… ကိုကြီး ) ( ယု က တကယ်လှတယ် ) ( ဟုတ်… ) ( ယု အိမ်ထောင် ထပ်ပြုဦးမှာလား ) ( အို ကိုကြီးကလဲ မပြုပါဘူး ဘာလို့လဲ) ( အော်…ယု အလှတွေ နောက်တစ်ယောက်လက်ထဲမှာ ပျက်ဆီးကုန်မှာ နှမျောမိလို့ပါ ) ( ဟွန်းးးး ကိုကြီးကလဲ ယုက အကြာကြီးတော့ လှနေမှာမ မဟုတ်တာ ကဲပါ လာပါကိုကြီးရဲ့ ထိုင်ပါဦး မျက်လုံးတွေလဲ ကျွတ်ထွက်ကုန်ဦးမယ် ) ယုနဲ့ကိုစိုး ကော်ဖီအတူတူထိုင်သောက်ရင်း စကားတွေပြောဖြစ်သည်။ ကိုစိုးကတော့ ယုကိုပဲ စိတ်ကြည့်နေသည်။
( အော်.. ကိုကြီး လာတုန်း အကူအညီတောင်းရဦးမယ် အခန်းထဲက သေတ္တာလေးနေရာရွှေ့ချင်နေတာ တစ်ယောက်ထဲ မနိုင်လို့ ကူပေးပါလား ) ( အော်.. ရပါတယ် ယုရဲ့ ဒါလောက်များ ) ယုအခန်းထဲကို ကိုစိုးလိုက်လာတယ်။ သန်ရှင်းရေးလုပ်ပီးကာစမို့ ယုအခန်းလေးက သန့်ရှင်းသပ်ရပ်နေပေမယ့် အဝတ်လှမ်းစင်ပေါ်မှ ယု အောက်ခံတွေက မသိမ်းထားရသေး။ အတွင်းခံပန်တီတွေနဲ့ ဘော်လီတွေ စီရီနေသည်။ အောက်ခံပန်တီတွေက အနက်ရောင်တွေချည်းပဲများတယ်။ ကိုစိုးက သေတ္တာကို မရွှေ့ပေးလိုက်ပီး ယုဘက်လှည့်ကာ ( ယုက အနက်ရောင်ကြိုက်တယ်ထင်တယ်နော် ) ( ရှင်.. ကိုကြီး ဘာလို့ ) ( အော်.. အောက်ခံတွေ အကုန်အနက်ရောင်တွေချည်းပဲမို့လို့လေ အခုရော အနက်ရောင်ပဲ ၀တ်ထားတာလား ) ( အာ အောက်ခံဘောင်းဘီပဲ အနက်ရောင်ပါ အပေါ်က ဘော်လီအဖြူလေ ကျောင်းသွားရမယ့်ဟာကို အယ်… ဘာတွေ လျောက်ပြောမိပါလိမ့် ) ယု ရှက်ပီး ခေါင်းငုံလိုက်မိသည်။
ကိုစိုးက ယုနားကို တိုးကပ်သွားကာ ယုရဲ့ ပုခုံးနှစ်ဘက်ကို လက်နဲ့စုပ်ကိုင်လိုက်ရင်း (ယုက အသားဖြူတော့ အနက်ရောင် အောက်ခံလေးနဲ့ အရမ်းလိုက်မှာပဲနော် ) (အို ကိုကြီးကလဲ ဘာတွေ လျောက်ပြောနေတာလဲ ) ယုခေါင်းငုံ့ထားလိုက်မိသည်။ ( ယု….ကိုကြီးလေ… ယုကို….. ) တုန်ရင်စွာပြောသည်။ ခေါင်းမော့လာတဲ့ ယုရဲ့ ပါးပြင်လေးကို နမ်းလိုက်သည် ( အို…ကိုကြီး… ) ( ကိုကြီး စိတ်တွေ မထိန်နိုင်တော့ဘူးကွာ ယုရဲ့အလှတွေကို ….) ယုကို ရင်ခွင်ထဲဆွဲသွင်းကာ ဖက်ထားလိုက်သည်။ ယုလဲ အလိုက်သင့်ပါသွားသည် ( ကိုကြီးကို စိတ်မဆိုးနဲ့နော် ယုကို ချစ်တယ်ကွာ ) ကိုစိုးရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာယုပါးလေး အပ်ထားလိုက်မိသည်။ ကိုစိုးရင်ခုန်သံတွေကိုကြားနေရသည်။ မှားလားမှန်လား ယုမသိချင်တော့။ ဟိုးအရင်ကတည်းက ကိုစိုးရင်ခွင်ထဲမှာ နေချင်ခဲ့မိတာလေ ( ယု ကျောင်းနောက်ကျလို့ရလားဟင်… ) ရင်ခွင်ထဲမှ ခေါင်းငြိမ့်ပြလိုက်မိသည် (ဟိုးးးအရင်ကတည်းက ယုကို ကျောင်းဝတ်စုံလေးနဲ့ အခုလို ဖက်ထားချင်ခဲ့တာ ခနခနပဲ ) တင်းကြပ်နေအောင် ဖက်ထားသည်မို့ ကိုစိုးရဲ့လိင်တံကြီးက ယု ဘိုက်သားကိုလာထောက်နေသည်။
ကိုစိုးလက်တွေက ယုတင်ပါးတွေကို ထမိန်ပေါ်ကနေ ပွတ်ပေးနေသည်မို့ ကြက်သီးပင်ထမိသည် ( ချစ်တယ် ယုရယ် …) တင်ပါးတွေကိုပွတ်ရင်း ယုနုတ်ခမ်းတွေကိုနမ်းတယ်။ ကိုစိုးရဲ့လျာနဲ့ယုရဲ့လျာ နှစ်ခု ရစ်သပ်မိလိုက်သည်။ ဒီလိုနေ့ရောက်ဘို့ခနခန ရင်ခုန်စောင့်ဆိုင်းနေမိတာကို ကိုကြီးကိုပြောပြချင်သေးသည်။ ယု တင်ပါးနှစ်ခြမ်းကြား ကို လက်နှိုက်ပီး ပွတ်နေသည်။ ကိုစိုးရဲ့ ကျောပြင်ကြီးကို သိုင်း ဖက်ထားမိသည်။ ယုဘိုက်သားနဲ့ ကိုစိုးရဲ့ လိင်တံကြီးကို ဖိကပ်ထားမိသည် ( ယု…. ကိုကြီးကို ခွင့်ပြုတော့နော် ကိုကြီး မနေနိုင်တော့ဘူး ) အနမ်းကိုခနခွာက ကိုစိုးက ပြောသည်။ အိမ်ထောင်သည်တွေမို့ ဘာကိုဆိုလိုသည်ကို ရှင်းပြစရာပင်မလိုပေ။ ကိုစိုးရဲ့လက်က ယုရဲ့ကျောင်းစိမ်းထမိန် အထက်ဆင်စလေးကိုဆွဲကာ ဖြေချလိုက်သည်။ ထမိန်လေး ခြေရင်းကို ကွင်းလုံးကျွတ်ကျသွားသည်။ ထို့ပြင်ကိုစိုးက သူ့ပုဆိုးကိုပါ ဆွဲချွတ်ပစ်လိုက်ပြန်သည်။ လုံးဝန်းတင်းခဲနေသာ တင်ပါးတွေကို မနိုင်ဝန်ထမ်းထားသည့် အောက်ခံပန်တီ အနက်ရောင်လေးပေါ်မှာ တင်ပါးတွေကို ကိုစိုးလက်နှစ်ဘက်ဖြစ် ဖျစ်ညှစ်နေသည်။ ကိုစိုးရဲ့လိင်တံကြီးကလဲ သူ့အောက်ခံ ဘောင်းဘီအောက်မှ ဖုဖုဖောင်းဖောင်းတိုးထွက်နေသည်။
ယုနဲ့ကိုစိုးအောက်ပိုင်းမှာ အတွင်းခံဘောင်းဘီလေး တွေသာ ကျန်တော့သည်။ နုတ်ခမ်းတွေကိုနမ်းလိုက် ပါးတွေကိုနမ်းလိုက် လည်ပင်းဂုတ်သားတွေကို နမ်းလိုက် နဲ့ ကိုစိုး အလုပ်ရှုပ်နေသည်။ ကျမ အဖုတ်ထဲမှာတော့ ချွဲကျိကျိဖြစ်နေပီ။ ယုတင်ပါးတွေကိုလဲ ကိုစိုးက ခပ်ကြမ်းကြမ်းစုပ်နယ်နေတယ်။ အတွင်းခံပန်တီမျော့ကြိုးထဲကို ကိုစိုးလက်တွေ ထိုးဝင်လာပီး ယုတင်ပါး အသားစိုင်နေကိုစုပ်နယ်တယ်။ ဖင်နှစ်ခြမ်းကြားထဲလက်ထိုးထည့်ကာ အမြှောင်းလိုက်ပွတ်ဆွဲပြန်တယ်။ အတော်ကြာနမ်းရှုပ်ပွတ်သပ်ပီးနောက် ကိုစိုးက ယုကို ကုတင်ပေါ်မှာလှဲစေလိုက်သည်။ ယုနဲ့ကိုစိုး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် တပ်မက်တဲ့ မျက်လုံးတွေဖြင့်ကြည့်မိကြသည်။ နှစ်ယောက်သား အသက်ရှူသံတွေလဲ တစ်ယောက်နားတစ်ယောက်ကြားနေရသည်။
(ချစ်တယ် ယုရယ်….. ) ကိုစိုးက ယုရဲ့ အောက်ခံပန်တီလေးကို မျှော့ကြိုးမှ ဆွဲကာ အောက်သို့ချွတ်ချလိုက်သည်။ တုတ်ခိုင်ဖြူဖွေးလှတဲ့ ပေါင်တံနှစ်ခုကြားမှာ မဲနက်နေတဲ့ အမွှေးအုံခပ်ထူထူက ပေါ်လွင်နေသည်။ ဖြူဖြူဖွေးဖွေး ပေါင်တံမှာ သွေးကြောစိမ်းစိမ်းလေးတွေပင် ပေါ်လွင်နေသေးသည်။ ကိုစိုးက အဖုတ်ကို အရင်လှမ်းမကိုင်။ ပေါင်တွင်းသားလေးတွေကို လက်ဖြင့်ဖွဖွပွတ်သည်။ ထို့နောက် အဖုတ်မွှေးလေးများကို ပွတ်သပ်သည်။ ပီးနောက် သူ့ရဲ့ အောက်ခံဘောင်းဘီကိုချွတ်လိုက်သည်။ ကိုစိုးလီးတံကြီး ငေါက်ကနဲထွက်လာသည်။ လုံးပတ်တုတ်သလို ရှည်လဲရှည်သည်။ ကိုစိုးလီးမှာ အမွှေးသိပ်မရှိ ရိတ်ထားသည်မှာ မကြာသေးသလို။ လီးတံအရှည်မှာ တစ်ထွာသာသာလောက်ရှိမည်။ ကိုစိုးလီးတံကြီးကိုကြည့်ပီး ယု တံတွေးမျိုချမိသည်။ ပက်လက်လှန်ထားသည့် ယုဘေးမှာ ဒူးထောက်ထိုင်ကာ ယုရဲ့ အဖုတ်အမွှေးလေးတွေကို ပွတ်သပ်ကစားနေရင်း ( ယု… ကိုင်ကြည့်လေ ) ယု ခေါင်းငြိမ့်လိုက်ပီး ကိုစိုးလီးတံကို လက်ဖဝါးနဲ့သာသာဖွဖွ ကိုင်လိုက်သည်။ အရမ်းကိုမာတောင့်နေပီး ဒစ်ဖျားမှာ အရည်စိုစိုလေးတွေထွက်နေသည်။ ယုလက်ဖဝါးနဲ့ အပြည့်ပင်ဖြစ်သည်။ လက်နဲ့စုပ်ကိုင်ကာ လီးအရည်ပြားကို အောက်သို့ဆွဲချလိုက်တော့ ဒစ်ခေါင်းက သိသိသာသာပေါ်ထွက်လာသည်။ အောက်ဆွဲချလိုက် အပေါ်ဆွဲတင်လိုက်ဖြင့် သာသာဖွဖွလေး လုပ်ပေးလိုက်တော့ လီးတံကြီး တဆတ်ဆတ်တုန်လာတာသတိပြုမိလိုက်သည်။
( ယု ပေါင်တံလေးတွေက လှလိုက်တာကွာ ဖြူဖွေးနေတာပဲ ) ပြောလဲပြော ပေါင်တွင်းသားလေးတွေကို နုတ်ခမ်းနဲ့ ကုန်းနမ်းကာစုပ်သည်။ ပေါင်မှာရှိတဲ့ မွှေးညှင်းလေးတွေ ထောင်ထသွားရသည်။ ယုရဲ့ ပေါင်တွင်းသား နေရာအနှံ့ကို ကိုစိုးက လျာနဲ့လိုက်ယက်သည်။ စုပ်သည်။ တကယ်လဲ ယုရဲ့ ပေါင်သားလေးတွေက ဖွေးဥပီး နမ်းချင်စရာကောင်းသည်မို့ ကိုစိုး သေသေချာချာ ကို ယက်လိုက် နမ်းလိုက် လုပ်နေမိသည်။ ထို့နောက် ကိုစိုးက ယုပေါင်ကြားသို့ နေရာယူလိုက်သည်မို့ ကိုစိုးလီးတံကို ယု လွှတ်ပေးလိုက်ရသည်။ ယုပေါင်နှစ်ချောင်ကို ကိုစိုးလက်နှစ်ဘက်နဲ့ ဘေးသို့ ဆွဲကားလိုက်သည်။ ပေါင်နှစ်ဘက်ကားသွားသည်မို့ ယုအဖုတ်လေးက အမွှေးထူထူတွေအောက်မှ ခပ်အာအာ လေး ပေါ်လွင်လာသည်။ အရည်တွေစိုကာ ပြောင်လက်နေသည်။
အစိထိပ်လေးကို အတိုင်းသားမြင်နေရသလို ခပ်အာအာ ဖြစ်နေသဖြင့် စောက်ခေါင်းသား နီရဲရဲလေးကိုပါမြင်နေရသည်။ စောက်ပတ်နုတ်ခမ်းသားလေးတွေ က ရှိတယ်ဆိုယုံလောက်သာ ။ ပြဲလန်နေခြင်းမျိုးမရှိ။ ယု စောက်ပတ်ကို သေချာစွာကြည့်ရင်း အစိထိပ်လေးကို လက်မနဲ့ချေလိုက်သည်။ ယု တစ်ယောက် ဓါတ်လိုက်သလိုမျိုး ကိုယ်လုံးလေး ခါထွက်သွားသည် ( အားးး ကိုကှီးးးးး ) ယု အော်ညည်းမိသည့်အခါ ကိုစိုးက အစိကို ပိုပွတ်သည်။ အရည်တွေ အရမ်းစိုလာလေသည်။ ထို့နောက် အဖုတ်နုတ်ခမ်းသားနှစ်ဘက်ကို လက်နဲ့ဆွဲဖွင့်လိုက်သည်။ ကိုစိုးဘာလုပ်တော့မည်ကို ယုသိနေသည်။ ပေါင်ကို ပိုမိုကားပေးမိလိုက်သည်။
ကိုစိုးက ယု စောက်စိပေါ်သို့ ပါးစပ်ဖြင့်အုပ်ကာ စုပ်လိုက်တော့သည် (ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ) ( အားးး အမလေးးးကိုကြီးရယ် အားးးရှီးးးး ) ( ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ) ( အားးး ဘယလှိုကှီးလဲ အားးး ကိုကှီး အားးးး ) ယုလဲ တင်ပါးကိုမြှောက်ကာ အဖုတ်ကို ကော့ပေးရင်း ကိုစိုခေါင်းမှ ဆံပင်တွေကိုဆုပ်ကိုင်ထားမိသည်။ လိင်မဆက်ဆံရသည်မှာ ကြာပီမို့ထင် အဖုတ်ထဲမှ အရည်တွေ တအားထွက်လာရသည်။ ကိုစိုးက လျာကို ခပ်ဆတ်ဆတ် လုပ်ရင်း ယက်သည်။ စောက်ပတ်ကြီး အမြုံလိုက်ကိုစိုး ပါးစပ်ထဲ ပါသွားသည်ပင်ထင်မိသည်။ ( အားး ကိုကြီးရယ် အ အ အ အ အားးး ကျွတ်ကျွတ် ) စောစောကမှ ကျောင်းသွားမှာမို့ ရေချိုး သန့်ရှင်းရေးလုပ်ထားသည်မို့ ယု အဖုတ်က အနံ့အသက်ကင်းကာ သန့်ရှင်းနေသည်။ ကိုစိုးလဲ ခယ်မဖြစ်သူရဲ့ အဖုတ်ကို အားရပါးရယက်သည်။ ဟိုး အရင်ကတည်းက ခယ်မ ဖြစ်သူကို လုပ်ချင်နေခဲ့တာ ကြာပီ။ ခယ်မဖြစ်သူ ယုရဲ့ ဖင်တွေ ရင်တွေ ကို ခနခန ခိုးကြည့်မိသည်။ ခယ်မဖြစ်သူ အိမ်ထောင်ကွဲပီးကတည်းက အစစအရာရာ ကူညီပေးနေသည်မှာ စေတနာလဲ ပါသလို ခယ်မကို ဝိုက်ချင်နေသည်လဲပါသည်။
တခါတလေ မိန်းမနှင့်လိုးနေရင်းမှ ခယ်မ ကိုလိုးနေသည်ဟုပင်စိတ်ထဲ တွေးကာ လိုးခဲ့တာ ခနခနပင်ဖြစ်သည်။ အခုတော့ ခယ်မဖြစ်သူကို အပိုင်ရလေပီ။ ခယ်မဖြစ်သူ ယုရဲ့ တင်ပါးတွေကို ကိုင်ချင်နေသည်မှာကြာပီ။ အဖုတ်ကို နှိုက်ကြည့်ချင်နေသည်မှာကြာပီဖြစ်ပေသည်။ ဒီနေ့တော့ စည်းတွေကျော်ကာ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရပီမို့ ယုရဲ့ အဖုတ်ကို ကိုင်ယုံတင်မက သေချာယက်ပေးနေဖြစ်သည် ( ပလက် ပလက် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပလက် ) ( အားးကိုကြီး အားးး ကောင်းလိုက်တာ အားးးရှီးးးး အမလေးးးး ) ယုရဲ့ ညည်းညူသံကြားရလေ စိတ်တွေ ပိုထပီး ပိုယက်မိလေဖြစ်နေသည်။ အစိထိပ်ကို လျာဖျာလေးနဲ့ယက်လိုက် စောက်ခေါင်းအတွင်းထဲထိုးထည့်လိုက်လုပ်သည်။ စောက်ပတ်နုတ်ခမ်းသား သေးသေးလေးကို နုတ်ခမ်းဖြင့် တပြွတ်ပြွတ် မြည်အောင်ဆွဲစုပ်မိသည်။ ဆီးခုံပေါ်မှ အဖုတ်မွှေးတွေကိုပါ နမ်းရှိုက်ဖြစ်သည်။ အရင်ကတည်းက တွေးနေခဲ့ဖူးသည်။ ခယ်မလေးဖြစ်သူက အသားဖြူတယ် အဖုတ်မွှေးထူထူ လေးရှိနိုင်တယ်လို့တွေးခဲ့ဖူးသည်။
တကယ်ပင် ခယ်မဖြစ်သူ ယုရဲ့ အဖုတ်မွှေးတွေက ခပ်ထူထူ လေးတွေ့လိုက်ရသည်မို့သဘောကျမိသည်။ ( ပြွတ် ပြွတ် ပလက် ပလက် ပြွတ် ပြွတ် ) ( အားးး အ အ ရှီးးး အားး ကိုကြီးးး အားးး မရတော့ဘူး ယုကိုလုပ်ပါတော့ အားးမနေတတ်တော့ဘူး ကိုကြီး လိုးပေးတော့နော် လိုးတော့နော် ကိုကြီး အားးးး ) တကယ်ပင် ယုမနေတတ်တော့သည်မို့ ပြောချလိုက်တော့သည်။ ဆက်ယက်နေရင် ခံနိုင်တော့မည်မဟုတ်။ စိတ်တွေ အရမ်းထကြွနေချိန်တွင် လီးတံကြီး ထိုးသွင်းရမှ အာသာပြေတော့မည်ဖြစ်သည်။ ကိုစိုးကို အတင်းဆွဲတင်လိုက်သည်။ ကိုစိုးလဲ ယု အရမ်းလိုချင်သည့်အချိန်ရောက်ပီမို့ လီးတံကြီးကို လက်ဖြင် တစ်ချက်နှစ်ချက် ဂွင်းထုကာ နေရာယူလိုက်သည်။ ထို့နောက် ဒစ်ဖျားဖြင့် ယု စောက်စိကို လေးငါးဆယ်ချက်လောက်ပွတ်လိုက်သည် ( အ အ အားးးကိုကှီးရယှ အားးး ) ( ဘွတ် …ပလွတ် ) ( အားးးးရှီးးး ၀င်သွားပီယု ) (အားးကောင်းတယ်ကိုကြီးရယ် ) ကိုစိုးကျောပြင်ကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ သိုင်းဖက်ထားမိသည်။ လီးတံကြီးက ယုအဖုတ်ထဲ တရစ်ရစ် တိုးဝင်လာသည်။
ယုရော ကိုစိုရော အပေါ်အကျီတွေ မချွတ်ထားရသေးပေ။ ယု အကျီကတော့ ခါးတိုရင်ဖုံးမို့ အနှောက်အယှက်မရှိပေမယ့် ကိုစိုးရဲ့ ရှပ်အကျီက ဆီးခုံနဲ့ မလွတ်မလပ်ဖြစ်နေသည်မို့ ယုကပင်ကိုစိုးအကျီ ကြယ်သီးတွေကိုဖြုတ်ပေးကာ ဆွဲချွတ်ပေးလိုက်သည်။ လီးတံကြီးက အဖုတ်အတွင်းသို့ အဆုံးထိနစ်ဝင်သွားပီ။ ကိုစိုးက ခါးရိုက်ကာ သွင်းလိုက်ထုတ်လိုက် စလုပ်တော့သည် ( ဖွတ် ဖွတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် ) ( အ အ အ အ ရှီးးး အ အမလေးးး ) ( ကောင်းလားယု ကိုကြီး လုပ်တာကောင်းရဲ့လား ) ( ကောင်းတယ် အားးး အ အ ကိုကြီး အားးးကောင်းတယ်ကွာ ) အဖုတ်ထဲကို လီးတံကြီး တဇွိဇွိ ၀င်ထွက်နေသည်။ ယုလဲ ပေါင်ကို အတတ်နိုင်ဆုံးကားကာ အဖုတ်ကို ကော့ပေးထားမိသည်။ အလိုးမခံရတာကြာတာလဲဖြစ် ချစ်ရသူ ခဲအိုကြီး လိုးနေတာလဲ ဖြစ်သည်မို့ ကာမရမ္မက်တွေ ထန်နေရသည်။ မခံစားရတာ ကြာပီဖြစ်တဲ့အတွက် အရမ်းကို ကောင်းလွန်းနေသည်။ ကိုစိုးအနေနဲ့လဲ ခယ်မ ဖြစ်သူကိုလိုးနေရသည်မို့ စိတ်ခံစားမှု တမူထူးခြားနေသည်။
(ဇွိ ဇွိ ဇွပ် ဇွပ် ဘွတ် ဘွတ် ဖတ် ဖတ် ) ဆီးခုံနှစ်ခုရိုက်သံရော အဖုတ်ထဲလီးဝင်သံရောကြားနေရသည်။ ကိုစိုးက ယုမျက်နှာကို အပေါ်မှ မိုးကြည့်ရင်း လီးတံနဲ့စောက်ပတ်ထဲ ဆောင့်လိုးပေးနေသည်။ ယုရဲ့မျက်နှာက တဏှာအခိုးအငွေ့တွေကို အတိုင်းသား မြင်နေရသည်။ လီးတံကို အဆုံးထိ ဆောင့်ထည့်လိုက်တိုင် ယုတစ်ယောက် ပါးစပ်လေးဟ ပီး တအားအား အော်နေသည်ကိုက စိတ်ထစရာပင်။ ယုရဲ့ စောက်ပတ် စောက်ခေါင်းသားကြွက်သားတွေက ကိုစိုးလီးကို ဆွဲညှစ်ပေးနေတာ ခံစားသိမိနေသည်။ ခယ်မလေး သူ့လီးနဲ့ စိတ်တအားပါနေသည်ကို သိရလို့ ကိုစိုးလဲ မနားတမ်း ဆောင့်လိုးနေမိသည် ( ဖွတ် ဖွတ် ဖွတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် ) ( အ အ အ အားးး ကောင်းတယ် ဆောင့်ပါကိုကြီး ယု ကောင်းတယ် အားးး အမလေးး ) ( အင့် အင့် အင့် အားးကောင်းလိုက်တာ ယု စောက်ပတ်ကို ကိုကြီးလိုးနေပီနော် ကိုကြီးလီးကောင်းလား ) ( အင်းး အားး ကောင်းတယ်ကိုကြီး အားးး တအားဆောင့်ပေး အားးး ) ( ဖွတ် ဖွတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် ) ( ဇွိ ဇွပ် ဇွိ ဇွပ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် ) ဆက်တိုက်ဆောင့်လိုးနေကြသည်မှာ နှစ်ယောက်သားချွေးစေးတွေပင် ပျံလာသည်။
အသက်ရှူသံတွေလဲ ပြင်းထန်နေရသည် ( ယု ဖင်ကုန်းပေးပါလား ယုဖင်ကိုကြည့်ပီး လိုးချင်တယ်နော် ) ( ဟုတ် ကိုကြီး ) ကိုစိုးလဲ ယုအဖုတ်ထဲမှ လီးတံကို ဆွဲနုတ်လိုက်သည် ( ဘွတ်…ပလွတ် ) စောက်ပတ်ထဲ အရည်တွေနဲ့ ဟာတာတာ ဖြစ်သွားသည်။ ယု စောက်ပတ်ကိုကြည့်လိုက်တော့ စောစောကထက် ပိုပီအာနေတယ် စောက်စိကလဲ ပိုထောင်နေသလိုဖြစ်နေတယ်။ စောက်ဖုတ်တဝိုက်မှာတော့ အရည်တွေစိုရွဲနေလေသည်။ ယုလဲ လေးဘက်ထောက်ကာ ဖင်ကုန်းပေးလိုက်သည်။ ဖင်ကုန်းလိုက်တော့ လုံးဝန်းဖြူဖွေးလှတဲ့ယုရဲ့ တင်ပါးတွေက ပိုပီး ကားထွက်လာသည်။ ဖင်နှစ်ခြမ်းကြားက ညိုတိုတိုစအိုပေါက်လေး ကလဲ အသည်းယားစရာကောင်းလှသည်။ ဒီဖင်ကြီးကို ခနခန ခိုးကြည့်နေခဲ့ရတာ အခုတော့ သူ့ရှေ့မှာ ဖင်ကုန်းထားလေပီ။ လှလိုက်တဲ့ဖင် တောင့်လိုက်တဲ့ဖင်။ တင်ပါးနှစ်ခြမ်းကို လက်ဖြင့် ပွတ်သပ်လိုက်သည်။
ထို့နောက် တင်ပါးနှစ်ခြမ်းကြားလီးအမြှောင်းလိုက်ထည့်ကာ ပွတ်ဆွဲလိုက်သည်။ စအိုပေါက်ကို လီးနဲ့ပွတ်ပေးနေသလို ဖြစ်နေသည်။ ( ယုရယ် လှလိုက်တာကွာ ယုဖင်က အရမ်းလှတာပဲ အားးး) ( အားးး ကိုကြီးရယ် လိုးပါတော့ကွာ မနေတတ်တော့ဘူး ဘယ်လိုကြီးလဲကွာ ) ( လိုးမယ်နော် ယုဖင်ကို အမြဲ စိတ်ထဲ မှန်းနေရတာ တအားလိုးမယ်နော် ညီမလေး ) ( အင်းးကိုကြီး စိတ်ကြိုက်လိုးပါတော့နော် ) ကိုစိုးလဲ ယုစောက်ပတ်အဝမှာ လီးတေ့လိုက်ပီး ပလွတ်ခနဲ တစ်ချက်ထဲ အဆုံးထိုးသွင်းလိုက်သည် ( အားးးးရှီးးးးကောင်းလိုက်တာ ကိုကြီးရယ် ) လီးတံကို ပြန်ဆွဲမနုတ်သေးပဲ အဆုံးထိ ဖိထားလိုက်ကာ စအိုပေါက်ကို လက်ခလယ်ထိုးထည့်လိုက်သည် ( အားးး ကိုကှီးးးး အ ) ခယ်မလေး တင်ပါးကြီး တွန့်ခါသွားသည်။ လက်ခလယ်ကို စအိုပေါက်ထဲမှာ ကစားပေးလိုက်သည် ( အားးးကိုကြီး ) လက်ခလယ်ကို တော်တော်ကြာအောင် ကစားပီးမှ စောက်ဖုတ်ထဲမှ လီးကို အထုတ်အသွင်းလုပ်လိုက်သည် (အားးး ရှီးးး ကောင်းတယ်ကိုကြီးရယ် ချစ်တယ် အားးးး ) ဖင်ပေါက်ထဲမှ လက်ချောင်းကို ပြန်ဆွဲနုတ်ကာ ယုရဲ့ ခါးစပ်နေရာကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် မိမိရရ ကိုင်ပီး တဖန်းဖန်း မြည်အောင် ဆောင့်လိုးလိုက်သည် ( ဖန်း ဖန်း ဖန်း ဖန်းးးး ) ယု တင်ပါးကြီးတွေ ရေလှိုင်းသဖွယ် တုန်ခါနေသည်မှာ ကြည့်လို့ကောင်းနေသည်။
( အင့် အင့် အင့် အားးး ယုဖင်ကြီးကို ကြိုက်လိုက်တာကွာ အင့် အင့် အင့် ) ( ဖန်း ဖန်း ဖန်းးး ) ( ဖွတ် ဖတ် ဖွတ် ဖတ် ဖွတ် ဖတ် ) ( အားးး အ အ အ ကောင်းတယ်ကိုကြီး ဆောင့် အားး ထိလိုက်တာကွာ အားးချစ်တယ် အားးး ) ယုလဲ စိတ်တွေ ထကြွကာ လေးဘက်ကုန်းရင်းက တင်ပါးကြီးတွေကို နောက်ပြန်ဆောင့်ပေးနေမိသည်။ ( ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် ) ( အားး ဟုတ်တယ် အဲ့လို ပြန်ဆောင့်ပေး ကောင်းလိုက်တာ ညီမလေးရယ် အားးး ) ( ဖွတ် ဖတ် ဖွတ် ဖတ် ) ကိုစိုးလီးတံထိပ်က ယုရဲ့ သားအိမ်ခေါင်းကိုပါ လာလာထောက်မိသည်။ ယုက တင်ပါးနဲ့ ပြန်အဆောင့် ကိုစိုးက လီးထိုးအသွင်းနဲ့ စည်းချက်မှန်လှသည်။ လီးတံကြီး စောက်ပတ်ထဲ ၀င်ထွက်နေသည်ကို ကိုစိုးငုံ့ကြည့်ရင်းလိုးနေသည်။ လီးတံကြီး ပြန်ဆွဲနုတ်လိုက်တိုင်း စောက်ပတ်နုတ်ခမ်းသားတွေက လီးတံနဲ့ ကပ်ပါလာသည်ကို တွေ့နေရသည်။ လီးတံနဲ့ အဖုတ်မှာ စောက်ရည်တွေ တော်တော်ရွှဲလာသည်။
( ဖွတ် ဖတ် ဖွတ် ဖတ် ဖွတ် ဖတ် ) ( အားး ကောင်းတယ် ကိုကြီး အားး တအားဆောင့်လိုးပေး ) လိုးလိုက်တိုင်း လှိုင်းထ နေသည့် တင်ပါးတွေကို ဖျစ်ညှစ်လိုက်သည်။ ( အားးးယုရယ် လှလိုက်တဲ့ ဖင်ကြီးကွာ အင့် အင့် အင့် ) ( ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဖွတ် ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ဖတ် ) ( အင့် အင့် အင့် အားးး ညီမလေးကို လိုးနေပီနော် အားးး ကောင်းလိုက်တဲ့ ဖင်ကြီး အင့် အင့် ) ( အ အ အားး ကောင်းတယ်ကိုကြီး အားးး ) ( ဒီဖင်ကြီးကို လိုးချင်နေတာကြာပီ အင့် အင့် အင့် ) ( အားးး လိုးကွာ လိုးးး မညှာနဲ့ကိုကြီး တအားလိုးပေး ) ( ညီမလေး ယု ဖင်ကြီးနဲ့ ပြန်ဆောင့်ပေးစမ်းပါ အရမ်းကြိုက်တယ် ) ( အင်းးးး အင့်အင့် အင့် အင့် ကောင်းလားကိုကြီး ) ( ဖွတ် ဖွတ် ဖွတ် ဖွတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် ) ( အားး ကြိုက်တယ်ကိုကြီး ) (ကောင်းလား ညီမလေး … အင့်အင့် ညီမလေး ကိုကြီးနဲ့ခံချင်နေတာကြာနေပီမလား ) ( အင်းးး ကောင်းတယ် ဟုတ်တယ် ခံချင်နေတာကြာပီ အားးး ကိုကြီးလဲ လိုးချင်နေတာ ကြာပီမလားးး ယု ဖင်ကို ခိုးခိုးကြည့်နေတာ သိတယ် အားးး လိုးးးး ) ( အင်းးးး ဟုတ်တယ် အင့်အင့် ယုဖင်ကိုကြည့်ရတာ စိတ်တအားထလို့ အင့်ကွာ အင့်အင့် ) ယုတင်ပါးကြီးနှစ်ဘက်ကို လက်နဲ့ တအားစုပ်နယ်ရင်း ဆောင့်လိုးနေသည်။ ( ဖွတ် ဖတ် ဖွတ် ဖတ် ဖွတ် ဖတ် ) ( ဇွိ ဇွပ် ဇွိ ဇွပ် ဇွိ ဇွပ် ) ( ဖန်း ဖန်း ဖန်း ဖန်း ) တခန်းလုံးလိုးသံတွေ ဆူညံနေလေသည်။ ဘယ်နှစ်ချက်တောင် ဆောင့်လိုးနေမိသည်ကို မရေတွက်နိုင်တော့။ လိုးချက်တွေကလဲ ထိမိလှသည်။
နှစ်ယောက်သား ကာမ အရသာ ကောင်းကောင်းခံစားမိနေသည်။ ကိုစိုး ဆောင့်လိုးရင်း နဲနဲ မောဟိုက်လာသဖြင့် လီးတံကို ဆွဲနုတ်လိုက်သည်။ ယုရဲ့ စောက်ရည်တွေ လီးတံမှာ ပေပွနေသည်။ အကြောအပြိုင်းပြိုင်းထနေသည့် လီးတံကြီးမှာ ယုရဲ့စောက်ရည်တွေဖြင့် ပြောင်လက်ချောမွတ်နေသည်။ (ကိုကြီး မောသွားလား ) ( အင်းးး ရတယ် ဆက်လိုးပေးမယ် ) ယုက ဖင်ကုန်းထားရာမှ ကိုစိုးဘက်ကိုလှည့်ကာ ထိုင်လိုက်သည်။ မျက်နှာမှာ ချွေးစေးလေးတွေ ပျံနေသည်။ အသက်ရှူသံလဲ ပြင်းနေသည်။ အပေါ်ပိုင်း ရင်ဖုံးအကျီအဖြူလေးမှာ မို့လိုက်ရှိုက်လိုက်နဲ့ အသက်ပြင်းပြင်းရှူ နေလေသည်။ ကိုစိုးက မွေ့ယာပေါ် ထင်ထိုင်ချလိုက်ရင်း လီးတံကိုကိုင်ကာ ပြန်မကျသွားစေရန် ဂွင်းတိုက်နေသည်။ ကိုစိုးရဲ့ လီးကိုင်ထားတဲ့ လက်ကို ယုလက်ဖြင့် အုပ်ကိုင်လိုက်ပီး ( ညီမလေး နမ်းပေးမယ်နော် ) အလိုက်သိတတ်တဲ့ယုကို ကိုစိုးသဘောကျသွားမိသည်။ ကိုစိုး လက်ကို လီးတံပေါ်မှ ဖယ်လိုက်ပီး ယုလက်ဖြင့် တစ်ချက်နှစ်ချက်ပွတ်သပ်လိုက်ပီး ဒစ်ဖျားကို ငုံစုပ်လိုက်သည်။ ယုရဲ့ နွေးထွေးလှတဲ့ အာခံတွင်းအရသာကို ခံစားမိလိုက်သည်။ ထို့နောက် ဒစ်ထိပ်ဖူးကို ရစ်သပ်လိုက်သည့် ယုရဲ့ လျာနွေးနွေးလေးရဲ့အထိအတွေ့ကို ခံစားလိုက်ရပြန်သည်။ ယုက ဒစ်ထိပ်ဖျားကိုလျာနဲ့မွှေထိုးပေးသည်။ ယုပါးစပ်ထဲမှာတော့ ယုရဲ့သုတ်ရည်ရော ကိုစိုးရဲ့လရေအရသာရော ခါးသက်သက်လို အရသာ ခံစားလိုက်ရသည်။ လီးအရင်းထိ ငုံပီး စုပ်လိုက်သည်။
( ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ) ( အားး ကောင်းလိုက်တာ ယုရယ် ) ယုရဲ့ ဆံထုံးလေးကို ကိုစိုးက ဖြေချပေးလိုက်သည်။ ဆံနွယ်တွေကို လက်ဖြင့်ထိုးဖွရင်း ခေါင်းကို ကိုင်ထားလိုက်သည်။ လီးတံကို လက်နဲ့ကိုင်ကာ သေချာ စုပ်ပေးနေသော ယုကို ကြည့်မိသည်။ ပါးလေး ပိန်လိုက် ဖောင်းလိုက်နဲ့ ဒစ်ဖျားကိုယက်လိုက် တစ်ချောင်းလုံးစုပ်လိုက်လုပ်နေသည်။ ( စုပ်လို့ကောင်းလား ယု ) မျက်လုံးလေး လှန်ကြည့်ကာ ခေါင်းငြိမ့်ပြသည်။ ပါးစပ်ထဲမှ လီးတံကို မချွတ်ပေ။ ယု လီးစုပ်နေသည်မှာ အရမ်းကြမ်းကြမ်းကြီးမဟုတ် ချောချောမွေ့မွေ့နဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုရှိသည်။ လီးတံတလျောက် စိုစွတ်အောင်လုပ်ပီး စုပ်ပေးနေခြင်းမျိုးဖြစ်သည်။ တာဝန်ကျေ စုပ်ပေးနေခြင်းမျိုးမဟုတ်ပဲ ကိုစိုး အရသာခံလို့ကောင်းအောင် စုပ်ပေးနေခြင်းမျိုးဖြစ်သည်။ ပါးစပ်ထဲ အထုတ်အသွင်းလုပ်ပေးပီးစုပ်ယုံတင်မဟုတ် လျာက လီးတံကို ရစ်ပတ် ကစားပေးရင်းစုပ်နေလေသည် ( အားးး ကောင်းလိုက်တာယုရယ် လုပ်တတ်လိုက်တာ အားးးအီးးးး ) ( ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ) ( အားးး ကောင်းလိုက်တာ ယုရယ် အားးရှီးးး အားးး ကောင်းတယ် ) ယုရဲ့စုပ်ချက်တွေက အဖုတ်ထဲလိုးရတာထက်ပင်ကောင်းနေလေသည်။
ချောမွေ့နေတဲ့လီးကို နုတ်ခမ်းလေးဖြင့် ဖိကာ အထုတ်အသွင်းလုပ်ပေးနေသလို အတွင်းမှ လျာကလဲ ကစားပေးနေတော့ ကိုစိုး အရမ်းကောင်း လီးထိပ်ဖျားမှာ ကျင်တက်လာသည်။ ယုခေါင်းကို ကိုင်ပီး အဖုတ်ထဲလိုးသလို လီးတံဖြင့် ညှောင့်လိုးနေရင်းမှ ( အ အ အားးးရှီးးးကောင်းတယ် ယု အားးညီမလေးးအ အားးး ထွက်….ထွက်ကုန်ပီ အားးအမလေးးး ) ဘယ်လိုမှ ထိန်းမထားနိုင်တော့သည်မို့ ယုပါးစပ်အတွင်း မှာပင် လရေပျစ်ခဲခဲတွေကို ပန်းထုတ်မိလိုက်တော့သည် ။ လီးတံကို ယုပါးစပ်အတွင်းမှာ ငြိမ်သက်စွာ ထားရင်း လရေတွေ ကုန်ဆုံးသွားသည် အထိ ပန်းထုတ်နေမိသည်။ ယု လည်ချောင်းအတွင်းထိ လရေတွေ တဖျောဖျော ပန်းထွက်နေသည်။ ( ဂလု …အွတ် အွတ် …. ) ယု လဲ လရေတွေကို မျိုချမိလိုက်သည်။ လီးတံကြီး တဆက်ဆက်တုန်နေရာမှ ငြိမ်ကျသွားသည်။ ယုလဲ လီးတံကိုပါးစပ်ထဲမှ ပြန်ထုတ်လိုက်သည် ( ဆောရီးနော် ညီမလေး ကိုကြီး မထိန်းနိုင်တော့လို့ ) လရေတွေကို အကုန်မျိုချရင်း ( ဟုတ် ရပါတယ်ကိုကြီး ယုလဲ ကြိုက်တယ် ) နုတ်ခမ်းကို လျာနဲ့သပ်ရင်း မေးစေ့မှာ ပေနေတဲ့ အရည်တွေကို လက်ချောင်းလေးများဖြင့်သပ်ယူကာ စုပ်လိုက်သေးသည်။
(ချစ်လိုက်တာယုရယ် …) ယုကိုယ်လုံးလေးကို ဆွဲယူရင်း နုတ်ခမ်းချင်း နမ်းလိုက်သည်။ (ယုရော ပီးရဲ့လား ကိုကြီး တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သွားလား ) ( ပီးပါတယ်ကိုကြီး ခုနက ကုံးပီး လိုးနေထဲက ယု ပီးနေတာ ကိုကြီးပီးအောင် ဆက်နေပေးနေတာလေ ယု ပျော်တယ်သိလား ခနနော် ကိုကြီး ) ကုတင်ဘေးစားပွဲပေါ်မှ ဟမ်းဖုန်းလေးလှမ်းယူကာ နံပါတ်တွေနှိပ်လိုက်ပီး ( ဟလို … ဟုတ်ကဲ့ ဆရာမကြီး ယု ဒီနေ့ နေမကောင်းဖြစ်နေလို့ ခွင့်လှမ်းတိုင်တာပါဆရာမကြီး ဟုတ်… ဟုတ်ကဲ့ … ယု အတန်းချိန်က နေ့လည်မှ နှစ်ချိန်ထဲပါ ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာမကြီးနောက်ရက်တွေ အစားပြန်ဝင်ပေးလိုက်ပါ့မယ်ရှင် ) ဟမ်းဖုန်းလေး ပြန်ချထားလိုက်ပီး ( ယု…ဒီနေ့ ကျောင်းမသွားတော့ဘူး ကိုကြီး ) ပြီးပါပြီ.